Maxay ka dhiganyihiin haddiyadaha Sucuudiga siiyo Trump ? - BBC News Somali
Trump oo Boqor Salmaan ka guddoomaya billad sharaf
Markii ra'isulwasaarihii hore ee Britain Winston Churchil uu booqasho ugu tagay boqorkii Sucuudiga Boqor Cabdicasiis Ibnu Sucuud sanadkii 1954-tii waxa uu ogaaday in haddiyaddii uu waday ee ahayd barfuumka qiimihiisu joogay $134 doolar aysan u dhigmin haddiyadii uu ka heley boqor Cabdicasiis oo ka koobnayd cumaamad xariir ah, waran iyo toorri dahab ka samaynaa iyo waliba kaatun (faraanti) dheemanka.
Islamarkii uu Britain kusoo laabtay, Ra'isulwasaare Churchil waxa uu amray in boqorka loo diro gaari ah nooca Rolls-Royce oo haddiyad ah. Xilligaas waxa uu ahaa markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana jiray culeys badan oo dhaqaale.
"Barigii hore dowladaha gacanka waxa ay bixin jireen haddiyado aad qaali u ah sida saacado, dahab iyo wixii la mid ah" ayuu yiri.
Ellen Wald oo buug ka qoreysa Sucuudiga ayaa sheegtay in tirada haddiyadaha ay ka turjumayaan tirada waftiga uu la'egyahay.
Barack Obama oo guddoomaya haddiyad go' shaal ah
Bill Clinton oo guddoomaya turumbo haddiyad ah
Trump oo Sucuudiga ka jeedin doona khudbad Islaamka ku saabsan